Uninzi abemi kuhlangana kunye shiya accusations ka-evading zabo military imisebenzi. Abantu abaninzi underestimate le meko, kokuqwalasela ukuba yonke into ekugqibeleni iya kuba KULUNGILE. Kodwa musa underestimate imeko kunye evasion ka-military umsebenzi. umthetho ubonelela yolawulo kwaye, ulwaphulo-mthetho eyimali ngokuphathelele oku. Ngalo ndlela, refusing ukuba uhlale e-military ukwahlula kwi-isaziso, ngokunxulumene inqaku, recruit unakho ukufumana kakuhle.Ngakumbi acute kwiimeko, ube prosecuted ye-hluke kakhulu amanqaku. Kwi-eyona imbi kunjalo, umtyholwa ajongene nokuvalelwa, ingakumbi iimeko ngokupheleleyo mobilization. Ingcebiso noncedo a military lawyer kwi-enjalo kwaye ezinje izakuba iluncedo kakhulu. I-specialists yethu esemthethweni ezingama-unako ngokukhawuleza kwaye shortest kunokwenzeka ixesha ukunceda wena. Abaqondisi-mthetho kwi-military Imicimbi uza lokucebisa kuwe ngomhla iingxaki idibene, ngokunjalo ukuqulunqa isicwangciso-buchule ukukhusela amalungelo akho kwaye umdla kwi-inkundla ukuba kuyimfuneko.
Iselwa rhoqo, abaninzi recruits thatha hasty izigqibo kunye namanyathelo malunga ngoku imeko, ngokusekelwe ezisisiseko ulwazi equlethwe kwi-Internet. Kodwa asinguye wonke ubani ikuqonda loo iintshukumo unako rhoqo kukhokelela ezinzima disastrous zoko olulolunye aggravate le meko. Njengomzekelo kwi-uqinisekiso lwe inappropriateness ezinjalo ukuba ufumana ethandwa kakhulu phakathi Internet abasebenzisi ethile isicelo supposedly ikunceda ukuba abandon mobilization, ukuba okokuba yona efanelekileyo abasemagunyeni.Ngelishwa, umthetho akakwazi kubonelela ukuba nabani na unako walile ukuba mobilize, kwaye ke ngoko ukufakwa loo nkcazelo ukuze urhulumente abasemagunyeni unako kuphela aggravate i-sele kunzima imeko apho ufuna ukufumana ngokwakho. Kuba ngempumelelo isisombululo ezinjalo iingxaki kubalulekile kakhulu ukuba uqhagamshelane i-experienced nkqo ekukhuseleni ilungelo lawyer. Luhlomle kuwo le lawyer okanye lamagqwetha ziya kukunceda ngokusemthethweni ulungise indlela umbuzo edalwa, kwaye yenze isigqibo ngayo ngokunxulumene nomthetho.
Ukongeza, umthetho zininzi izenzo enikezela ezahlukeneyo izibonelelo zezentlalo iziqinisekiso kuba servicemen. Kodwa, njengoko abaninzi bazi, akusoloko kuba guaranteed. Kwiminyaka yakutsha nje ingxaki yokufumana loluntu iziqinisekiso ukusuka urhulumente sele worsened. Umzekelo, abanye abasebenzi babe linda ngaphezu ezimbini okanye nkqu iinyanga ezintathu, nangona umthetho ubonelela a ubukhulu ixesha enye inyanga. Abanye abaphathi zithe humbled kunye enjalo hitches, kodwa simele hayi kuncama yintoni akhoyo kuwe nge ekunene.Ukusombulula ezi kwaye efanayo iingxaki kuya kusinceda kuphela elinolwazi isemthethweni ingcebiso. Zethu ingcaphephe unako rhoqo kukunceda ngaphandle kwi-ezibonelelwe ngu-mthetho wepalamente ixesha ukufumana kufuneka izibonelelo nezinye loluntu iziqinisekiso.
Ipropati Abaqondisi-Mthetho Isemthethweni Thelekisa Umthetho Library